Waraana Tigraay: Aanga’aan olaanaa Itoophiyaa Iyyoob Takkaalliny ‘waraanni jiraachuu hin qabu’ jedhan – AMBO TV
Ministirri Deetaa Ministeera Maallaqaa Itoophiyaa Iyyoob Takkaaliny Tolinnaa (PhD) ‘Itoophiyaa keessa waraanni jiraachuu hin qabu’ jechuun waan aanga’oota olaanoo biyyattii biratti hin baratamne barreessan.
Ergaa fuula Tiwiitaraa isaanii irratti barreessaniin aanga’aan kun “Itoophiyaa keessa nagaan akka jiraatuu fi karaa badhaadhinaarra gara fuula duraa adeemuuf wayita ciminaan hojjechaa jirrutti, amma booda Itoophiyaa keessa waraanni jiraachuu akka hin qabne murtoon waloo haa jiraatu,” jedhan.
Itti dabaluunis “qawween gaarummaaf callisiifamuu qaba, humna guutuun Itoophiyaa ijaaruu” irratti fuulleffachuun akka barbaachisu himan.
As we work hard to to win peace in #Ethiopia and move forward on our #prosperity path, let there be a collective resolve that there should no longer be war in Ethiopia. As @AbiyAhmedAli notes, war is the epitome of hell. Guns should be silenced for good.Full effort in building 🇪🇹
— Eyob Tekalign Tolina(PhD) (@EyobTolina) September 23, 2021
Yaada akkanaa aanga’oota olaanoo Itoophiyaarraa dhagahuun amma dura waan baratame miti.
Ameerikaa fi UN dabalatee biyyooti lixaa akkasumas dhaabbileen gargaarsa namoomaa, waraanni akka dhaabbatuu fi mariin rakkoon jiru akka furamu waamichi taasisaa turan mootummaa biratti fudhatama hin arganne.
Waraana Sadaasa bara 2021 naannoo Tigraay keessatti eegalee, baatilee darban gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal’ateen, namoonni kumaatamaan lakkaa’aman lubbuu dhabanii, miliyoonotaan kan lakkaa’aman qe’eerraa buqqa’aniiru.
Tigraay keessatti sababa waraana kanaatiin namoonni beelaan du’aa akka jiran naannicha kan harkaa qabu ABUT/TPLF beeksiseera.
Naannoo Amaaraa waraanni keessatti godhamaa jiru keessattis lammileen beela’aa jiraachuu mootummaan naannoo Amaaraa fi kan federaalaa ibsaniiru.
Waraanni kun dhaabbatee gargaarsi namoomaa danqaa malee akka kanneen rakkatan dhaqqabu dhiibbaa gochaa kan jirtu Ameerikaan, torbee darbe qooda fudhattoota waraanichaarra qoqqobbii kaa’uuf ajaja dabarsitee jirti.
Ministirri haajaa alaa US Antonii Bilinken ”mootummaan Itoophiyaa fi TPLF lola dhaabanii, hatattamaa fi haalduree tokko malee waraana dhaabuu mariirratti hundaa’e yoo tolchan, US qoqqobbii kaahuuf jettu tursiisuu malti,” jechuu Rooyitarsi gabaaseera.
Ejjennoo Ameerikaa kana TPLF guutummaatti kan deeggare yoo ta’u, mootummaan federaalaa Itoophiyaa garuu waan simate hin fakkaatu.
MM Abiy Ahimad xalayaa banaa Jimaata darbe pireezidant Joo Baayidaniif barreessaniin, Ameerikaan dhiibbaa hin malle Itoophiyaarran gahaa akka jirtu eeruun, Itoophiyaan dhiibbaa kanaaf akka hin jilbeeffanne barreessan.
Roobii kaleessa dhimma nageenyaa, siyaasaa fi diinagdee biyyaa irratti kan mari’ate koreen hoji-raawwachiiftuu paartii biyya bulchaa jiruu, wantoota fooyya’uu qaban, qaawwaa jiru irratti mari’atee kallattii fuula duraa kaa’uu MM Abiy Ahimad himaniiru.
Guyyaa tokko dura Kibxata ammoo manni maree nageenyaa Itoophiyaa dhimma nageenyaa biyyattii irratti erga mari’ateen booda, hojiiwwan hojjetamuu qabu jedhe kallattii kaa’uus MM Abiy himanii turan.
Kallattiin koreen hoji-raawwachiiftuu paartii Badhaadhinaa akkasumas manni maree nageenyaa biyyaalessaa kaa’e kun maal akka ta’an ifatti wanti himame hin jiru.
Haalota kana keessatti dubbiin ministira maallaqaa Itoophiyaa Dr Iyyoob Takkaaliny Tolinnaa kun kan dhagahame.
Yaadni ‘waraanni jiraachuu hin qabu, qawween callisiifamuu qaba’ jedhu qondaalli olaanaa kun barreessan, qoqqobbii Ameerikaan booda sadarkaa mootummaatti ejjennoon jijjiirame haa jiraatuu, yaada dhuunfaa aanga’aa kanaa haa ta’uu wanti beekame hin jiru.
Previous PostTigray mothers share shocking accounts of dire famine conditions
Next Postየኢትዮጵያ ሁከት በዋሽንግተን ስለ የእርስ በእርስ ጦርነት ስጋት ፈጠረ